News & Features - All Things Myanmar Burmese
News & Features - shweDarling.com Blog
◾️ မင်းတို့ ထမင်းဝအောင်စားထား “အင်္ကျီင်္ီင်္ီင်္ီဝတ်သူများ ကြည်လင်းအပါလေးဦးကို လာရောက်ဝန်းရံ [Latest News] ရန်ကုန်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂ ဦးကိုနီကိုလုပ်ကြံသူအဖြစ် တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရသူ ကြည်လင်းအပါလေးဦးကို ယနေ့( ဖေဖော်ဝါရီ ၂) ရက်တွင် (၄၂) ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းအဖြစ် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌ ရုံးထုတ်ရာ “မင်းတို့ ထမင်းဝအောင်စားထား”ဟူသော စာတမ်းများပါသည့်အင်္ကျီများဖြင့် လူတစ်ချို့လာရောက်ဝန်းရံခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ရုံးချိန်းတွင် တရားစွဲဆိုခံရသူများအား စွဲချက်တင်ရန်သင့်မသင့်ကို နှစ်ဖက်ရှေ့နေများမှ လျှောက်လဲချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ – ထက်ဧကရီ၊ ခေါင်နုတ် Is this mean Than Shwe coming back and take power?
ကန်​​တော်​ကြီးပဲ​လေစ့်​ ဟိုတယ်​ level4မီး​လောင်​ပြင်​တွင်​ မီးငြှိမ်းသတ်​ရင်း ဦး​ခေါင်းထိခိုက်​ဒဏ်​ရာ ရရှိ၍ ရန်​ကုန်​​ဆေးရုံကြီးတွင်​ ​ဆေးဝါးကုသမူခံယူ​နေ​သော ဦးစီးအရာရှိ ဆရာ ဦးကျော်စွာလင်း ယ​နေ့ 28.1.2018ရက်​ (၂၀:၂၀)အချိန်တွင်ကွယ်လွန်သွားပါပြီ ၊ ​ကောင်ူးရာဘုံဘဝကိုရောက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာ၊ မိသားစုနဲ့ ထပ်​တူဝမ်းနည်း​ကြေကွဲရပါတယ်​ဆရာ ဝမ်းနည်းစွာဖြင့်​ (စမ်း​ချောင်းမြို့ နယ်​အရန်​မီးသတ်​တပ်​ဖွဲ့ ) Credit to ရဲသူရိန် ရဲသူရိန်
Posted in Myanmar/Burmese, Notes | No Comments »
လူပါးတွေ ဝချက်ကွာ … ထောင်ထဲမှာ နေရတဲ့ လူသတ်သမားတွေတဲ့ … တွေးစရာတွေပေးနေတဲ့ လူသတ်ကောင်များနဲ့ မျိုးချစ်များရဲ့ အင်းစိန်ထောင်တွင်းဓာတ်ပုံ ==================== မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တွင်ဆူပူရန်လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်ပစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရသူများနှင့်ဦးကိုနီအားလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သူများ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးထားမှုကုို Myanmar Muslim Media က ဖေ့စ်ဘုတ်လူမှုကွန်ရက်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သန်းကျော်ဝင်း အမည်ဖြင့်ဖေ့စ်ဘုတ်လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးက အဆိုပါဓာတ်ပုံကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မိနစ် ၃၀ ၀န်းကျင်ခန့် ဖေါ်ပြပြီးနောက်ပြန်လည်ဖျက်သိမ်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။ သာမန်ပြည်သူများ၊ သတင်းထောက်များ၊နှင့်အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းများပင်လျှင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်မရှိသည့် အင်းစိန်ထောင်အတွင်း စုပေါင်းဘုံကထိန်ကျင်းပစဉ်တွင် ရိုက်ကူးထားသည်ဟု ယူဆရသည့် အထက်ပါဓာတ်ပုံတွင် ဦးကိုနီအားလုပ်ကြံသည့် အမှုတွဲများနှင့် မဘသ(ယခု ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်း)ထောက်ခံသူများသည် အေးဆေးရွင်လန်းစွာဖြင့် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံနေသည့် ဓာတ်ပုံက လုံခြုံရေးစည်းကျိုးပေါက်မှုတစ်ခုထက်ပိုသည့် သဘောတရားများပါဝင်နေကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတစ်ဦးကသုံးသပ်သည်။ “ဒါဟာလုံခြုံရေးစည်းကျိုးပေါက်တယ်လို့သုံးသပ်တယ်။ဒီလူတွေဟာ ထောင်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလှုပ်ရှားခွင့်ရနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ သူတွေဟာ အကျဉ်းဦးစီးဌာနထက်ပြည်ထဲရေးအပါအ၀င်တိုင်းပြည်မှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ တော်တော်လေးကို […]
(Debit Card/Credit Card/Visa Card/Master Card အစရှိသော ကဒ်အမျိုးမျိုးအား အသုံးပြုနေသော သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ သိရှိစေရန် ဒီပို့စ်ကို တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်) ကျွန်မရဲ့ ကျပ်သိန်း ၁၂၀ တန် အတွေ့အကြုံ **************************************** ဖြစ်ပုံအကြောင်းစုံမှာ … – ကျွန်မသည် America သို့ ရက်ရှည်ခရီးထွက်ရန်ရှိသဖြင့် 8th Sep 2017 တွင် အလုံမြို့နယ်ရှိ River View Condo တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော AYA Bank တွင် World Travel Card (Debit Card) အား ဖွင့်လှစ်၍ Usd 10,000 ကဒ်တွင်းသို့ ဖြည့်ခဲ့ပါသည် – Los Angeles မြို့၌ မိသားစုဖြင့် လည်ပတ်နေစဉ် […]
၂၂ရက်နေ့က #Ooredoo တစ်သောင်းဖြည့်ရင်ငါးထောင် အပိုဆိုလို့ ဖြည့်လိုက်တယ်။ တကယ်ဆို ကိုယ်က လိုင်း ၃မျိုးလုံးသုံးနေတဲ့အတွက် #ooredoo တစ်မျိုးတည်းသုံးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ ၅၀၀၀ အပိုဟာ အင်တာနက်ရော call ရောသုံးလို့ရတယ်တဲ့။ ကိုယ်က အဲဒီ #ooredoo ကို ဖုန်းခေါ်လေ့မရှိဘူး။ အင်တာနက်ပဲသုံးတာ။ package လည်းဝယ်ထားတာ။ 2G လောက်ကျန်တယ်။ ဟော ဒီမနက်ကျ message ဝင်လာတယ်။ အင်တာနက်သုံးနေတာ ၁၄၀ရှိပြီတဲ့။ လူလည်း အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်။ package တစ်ခုလုံးလည်းရှိတယ်။ Bonus ၅၀၀၀ လည်းရှိလျက်နဲ့ ဘာတွက် ၁၄၀ လဲ ဆိုပြီး bill စစ်တော့ တစ်ထောင်ကျော်ပဲကျန်တယ်။ ငွေတစ်သောင်း တစ်ထောင်ကျော်ကနေ တစ်ထောင်ကျော်ဆိုတော့ တစ်သောင်းလုံးပျောက်သွားတာ။ ဒါနဲ့ Bous ကြည့်တော့ Bonus […]
အမြတ်ငွေများစွာပေးမည်ဆိုကာ ရှယ်ယာဝင်များထံမှ ကျပ်သိန်းသောင်းချီလိမ်လည်၍ တိမ်းရှောင် Jude Jude Family၊ သင့်မြတ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးသည် အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသူများထံမှ ကျပ်သိန်းပေါင်း ရှစ်သောင်းခန့် လိမ်လည်၍ တိမ်းရှောင်နေ ကြောင်း ရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသူများက 7Day Daily အား ပြောကြားသည်။ ယမန်နေ့ညတွင် ရှယ်ယာဝင်ဦးရေ ၂၀၀ ခန့်သည် အဆိုပါလုပ်ငန်းရုံးဖွင့်ထား သော ဆီဒိုးနားဟိုတယ်သို့ လာရောက်စုရုံး ကာ ရှယ်ယာငွေများ ပြန်လည်ရရှိရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ရှယ်ယာ ဝင်များက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အချို့နှင့် ရှေ့နေများ ခေါ်ဆောင်လာကာ ကုမ္ပဏီရှိ တာဝန်ရှိသူများကို ၎င်း တို့၏ ငွေကြေးကိစ္စ ဖြေရှင်းပေးရန် စုဝေးတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ယမန်နေ့ညနေက အဆိုပါကုမ္ပဏီတွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးသာ ရှိနေပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ၎င်းနှင့်ညှိနှိုင်း၍ […]
Aye Myat Thu pay respect to Ma Gyi San
Posted in Humor, shweDarling | No Comments »
Happy Birthday To Ba Ba U Tin Oo
၁၂.၃.၂၀၁၇..ဘဘသူရဦးတင်ဦး၏အသက်(၉၀)ပြည့်မွေးနေ့……… Credit to (Sayama ) Than Myint Aung
Posted in Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples, Free Burma | No Comments »
Article about recent Incident of boat capsized
ဟုမ္မလင်းမြို့မှ မုံရွာသို့ ကားလမ်းကလည်း မကောင်း။မိုးတွင်းဆို တမိုးတွင်းလုံး ကားလမ်းက လုံးဝကိုသုံးလို့မရ။မသိတဲ့သူတွေက နင်တို့မြို့ရထားလမ်းရှိလား ကားနဲ့လာလို့ရလားမေးရင် ဖြေရတာရှက်စရာ ဘာနဲ့မှလာလို့မရ။ လေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းနှစ်ခုသာဆက်သွယ်ရေး ရှိတဲ့ ငါတို့ဟုမ္မလင်းမြို့။ ဟုမ္မလင်းမြို့က ဝန်ထမ်းထိပ်ပိုင်းအရာရှိများ မြို့မိမြို့ဖများ ငွေကြေးတတ်နိုင်သုအများစုက လေကြောင်းနဲ့ပဲသွားလာကြ။ အောက်ခြေဝန်ထမ်းများ အခြေခံလူတန်းစားများကတော့ ချင်းတွင်းမြစ်ရေကြောင်းလမ်းသာ တခုတည်းသောမှီခိုအားထားရာ။ အမြန်ယာဉ်ခရီးယာဉ်စီးခရီးမျက်နှာမွဲများမို့ ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတာ စစ်အစိုးရလက်ထက်အတည်းက အခုချိန်ထိ။ ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းထဲမှာလည်း အစိးုရသင်္ဘောအကြီးတွေက ရေကြောင်းပါးလာကတည်းက မပြေးဆွဲတော့။ စီးစရာဆိုလို့ မူးလို့ရှုစရာ အမြန်ယာာဉ်ခေါ်ခေါ် ရှပ်ပြေး စက်လှေခေါ်ခေါ် တစ်မျိုးတည်းသာရှိတော့တယ်။အမြန်ယာဉ် Upper room ဆိုလည်းနာမည်ပဲသာရှိတာအထဲမှာကငပိသိပ်ငချဉ်သိပ် ခြေထောက်ဆန့်လို့မလွယ် ဝင်မလွယ် ထွက်မလွယ် ဖြစ်ပြီတဲ့ဆို သေယုံသာ။ ရိုးရိုးတန်းဆို ဟမလကနေ မုံရွာအထိ ၂၄ နာရီကြာအောင် အိပ်ငုတ်တုတ် စားငုတ်တုတ် ခြေထောက်သွေးကျအောင် စီးပေတော့။ လူကျပ်တဲ့အချိန်ဆို […]
Questions about legal system in Myanmar?
ဥပဒေနဲ့သာ ဆုံးမပေးပါ… *** မကြာသေးခင် ကာလတွေကပါပဲ။ ချောစန္ဒီထွန်း ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးငယ် တယောက် သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မှာ ရေးသားချက် တခုကြောင့် ထောင်နန်းစံခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုပဲ…။ ဦးခွန်ဂျာလီဟာ သူ့အကောင့်ကနေ ရှယ်ယာလုပ်မိတဲ့ ဓာတ်ပုံ တပုံ အတွက်နဲ့ ထောင်ထဲဝင်ခဲ့ရတယ်။ *** ကဗျာဆရာ မောင်ဆောင်းခဟာ သူရေးမိတဲ့ ကဗျာတပုဒ် အတွက်နဲ့ အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၊ ညွန်မှူး ဦးဇော်ဌေးက “ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူဖို့ ပြင်ထားပါ” လို့ ကိုယ်ပိုင် ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ကနေ ကြိမ်းဝါးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာပဲ မောင်ဆောင်းခကို မရအရ ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ချပစ်ခဲ့တယ်။ *** ကာလ အရွေ့အလျော မကြာသေးခင်ကပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီဘက် ပြောင်းလဲလာတဲ့ […]
Behind the scenes of Pulitzer Winning photo of September 27
“ပူလစ်ဆာရ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ နောက်ကွယ်..” ဒီနေ့ဆိုရင် စက်တင်ဘာလ 27 ရက် လွန်ခဲ့တဲ့ ကိုးနှစ်အကြာက… ဘုန်းကြီးအရေးဖြစ်စဉ်မှာ… စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့အခါ… ဂျပန် သတင်းဌာနက သတင်းထောက်တစ်ယောက် သေနတ်ထိမှန်ပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်…. အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင်တဲ့သူကတော့… ရိုက်တာ သတင်းဌာနရဲ့ အကြီးတန်းဓာတ်ပုံသတင်းထောက် အဒွိလတစ် ပါ… အဲဒီဓာတ်ပုံကို ပူလစ်ဇာဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် စက်ရပ်သတင်း ကဏ္ဍမှာ ဆုပေးခဲ့ပါတယ်… ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ကို စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ စပြီးရောက်ရှိလာပါတယ်… သိပ်များများစားစား သယ်မလာပါဘူး အဝတ်စားအဟောင်း တစ်ချို့နဲ့ Canon 5D ( အဲဒီခေတ်က 5D Mark II မပေါ်သေးပါ ) တစ်လုံးရယ် Fixed Lens နှစ်ခုရယ် လက်တော့တစ်လုံးရယ်နဲ့ပါ… (အဲဒီခေတ်က […]
Who killed Phyo Thuya?
ဖြိုးသူရကို ဘယ်သူသတ်သလဲ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၊ မန္တလေး မြေးချစ်ညို ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၃၀ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့ကရဲစခန်းထဲမှာ အရိုက်အနှက် ခံရမှုကြောင့် ဖြိုးသူရဆိုတဲ့ အသက် ၂၃နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသေဆုံးမှုဟာ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဘယ်ဝါကြောင့်လို့ ဂဃနဏ မသိရပေမယ့် သေချာတာကတော့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာ ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကို မရခဲ့ပဲ မျက်ကွယ်မှာအသတ်ခံရတာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုရင် အမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါ တရားလိုဖြစ်တဲ့သူက မူဆယ်ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့က တပ်ကြပ်ကြီးရဲမြင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဖြိုးသူရကို တပ်ကြပ်ရဲမြင့်က ရဲစခန်းခေါ်သွားပြီးနောက်မှာတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ အဆက်အသွယ်မရတော့ပါဘူး။ မူဆယ်မြို့က ဒေသခံလူငယ်တစ်ယောက်ကို Friday Times က ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ချက်အရ ဖြိုးသူရ ၊ သက်ပိုင်မှူး ၊ ဖြိုးသူရရဲ့ ညီဖြစ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဟာ […]
“အောက်တန်းစားတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်” လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ထိခိုက်နစ်နာအောင် ဆဲရေးတိုင်းထွာကြတဲ့အခါ အမိကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲခြင်း၊ အဖကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲခြင်း၊ အမျိုးဇာတိကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲခြင်း ဆိုပြီး ရှိပါသတဲ့။ တိုင်းပြည်ကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲရေးခြင်းဆိုတာ ရှိလာရင်တော့ တော်တော်ကို မခံချိမခံသာ ဒေါသထွက်စရာကောင်းမယ့် ဖြစ်ရပ်ပေပဲ။ ဒါပေမယ်လို့ ဆဲရေးတဲ့အခါ အဆဲခံရတဲ့သူဘက်မှာ တဘက်က ပုတ်ခတ်ဆဲဆိုနေသလို မဟုတ်ပဲ အပြစ်အနာအဆာ ကင်းနေလို့ရှိရင် သူ့ဘာသူ ဘာကြီးနဲ့ကိုင်တုပ်တုပ် သူသာလျှင် ကျက်သရေယုတ်ရမယ့် အဖြစ်မျိုးပါ။ ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတည်းက “အသင်ပုဏ္ဏား ဆဲရေးသမျှကို ငါဘုရား မခံယူသဖြင့် သင်ပိုင်ပစ္စည်းသာ ဖြစ်တော့သည်။” လို့ မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သလိုပေါ့။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ အပနာမ ပြောကြပလေ့စေ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သင်္ကာရှင်းနေလို့ရှိရင် ဘာမှတုန့်ပြန်ပြောဆိုနေစရာ မလိုပါဘူး။ ပိန်းကြာဖက်မှန်ရင် ရေမတင်ဘူးတဲ့။ “ပွတ်လေလေ ဂူရွှေမှာ အရောင်ထွက်တယ် ရှေးကထက်ကဲ” ဆိုတဲ့ ပတ္တမြားရွှေဂူ ကဗျာလည်း […]
Amay Suu Kyi Re-union with Grand kids for first time
နှစ်ပေါင်းများ စွာကွဲကွာပြီး ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့ ဆုံ ခဲ့ ရတဲ့ အမေ စု နဲ့ သား သမီး မြေး တစ်စု Credit to Saw Phoe khwar
Posted in Articles, Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples, Free Burma, Knowledge Base, Myanmar/Burmese | No Comments »
မြန်မာ နိုင်ငံ အစိုးရ အသစ်နဲ့ ရက် ၁၀၀ ခရီး
တခါတလေ သဘာဝ သဃံဇာတတွေ သူများနိုင်ငံကို ဈေးပေါပေါနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီး ရောက်သွားတာ အရမ်းနှမြောဖို့ ကောင်းတယ်။ ရွှေ ဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၄ ဘီယျံက ဥက္ကာခဲ နှင့် ကမ္ဘာတိုက်ပြီး ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဓါတု ဖြစ်စဉ်ကနေဖြစ်လာတဲ့ သတ္တု တမျိုး။ နေရာတိုင်းမှာ မရှိဘူး။ တချို့ဒေသတချို့မှာသာရှိတယ်။ ကျောက်စိမ်းဆိုလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ လန်ထွက်နေတဲ့ ကျောက်စိမ်း ၂ နိုင်ငံပဲ ထွက်တယ်။ ဂွာတီ မာလာနဲ့ မြန်မာပြည်က ကချင်ပြည်နယ်။ ကျန်တဲ့ တချို့နိုင်ငံတွေတော့ ထွက်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ်က ကျောက်စိမ်းလောက် အရေအသွေး မကောင်းသလို .. ယနေ့ မြန်မာပြည်က ဘုရားတွေမှာ အလှဆင်တဲ့ ကျောက်စိမ်းပြားသာသာ အရည်အသွေးပါ။ ကျောက်စိမ်းဆို လိုချင်လွန်းလို့ သွားရည်ကျတဲ့ […]
Myanmar president examined flood area with Irrawaddy PM
Save this police officer from Myanmar
သမီးငယ်(or)ပြည်သူများနားလည်စေဖို့ မကွေးမြို့နယ်မှနစ်နာသူဗိုလ်လေးအားအစဉ်လေးစားလျှက် ရဲမိသားစုမှန်လျှင် ဝိုင်း မန့် ပေးကြပါဦး အိုအေးအို သမီးငယ်လေး သို့ မီးမီးလေးရေ ဖေဖေဟာ တာဝန်သိပြည့်သူ့ရဲ ဝန်ထမ်းတဦးပါ မီးမီးရေ ဖေဖေတို့ ရဲ ဆိုတာပြည်သူတွေအေးချမ်းစွာ အိပ်စက်နိူင်ဖို့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းနှိုင်း ခွေး တကောင်လို သခင်ကျွေးတာစားပြီး ခြံ လုံအောင်စောင့်ရတာမို့ ဖေဖေတို့လည်းပြည်သူကကျွေးတဲ့လစာ စားသူတွေမို့ ပြည်သူတွေအေးချမ်းစွာအိပ်စက်နိူင်ဖို့လှည့်ကင်းထွတ်နေရတယ် မီးမီးရေ ဖေဖေတို့လှည့်ကင်းလှည့်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေ ညည့်လူ အန္တရာယ်တွေကာကွယ်နိူင်ဖို့အတွက်ပါ မီးမီး ငယ် ညည့်လူတွေဆိုတာ မကောင်းမှု့လုပ်ငန်းတွေကိုညအခါမှာကျူးလွန်လေ့ရှိတာမို့ပါ မီးမီးငယ် ဖေဖေတို့လည်း လူသားတွေပါ မီးမီးငယ် လှည့်ကင့်မလှည့်ပဲ အိပ်နေချင်နေတာပေါ့ သမီးငယ် ဖေဖေတို့ ရဲ တွေရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေမှာ ပြည်သူအားလုံးရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်းတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက် ပါဝင်နေခဲ့တယ် သမီးငယ် ဖေဖေ တည လှည့်ကင်းလှည့်ရင်း အာဏာကိုအလွဲသုံးစား […]
Amay Suu visits to China
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ (သြဂုတ်လ ၁၈ရက်) မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပေကျင်းမြို့ ပြည်သူ့ခန်းမဆောင်၊ Great Hall of the People , North Hall တွင် တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်က ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆိုသည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် အလေးပြုခံပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အား စစ်ဆေးခဲ့သည်။ credit to Photos – Reuters
#နိုင်ငံကိုဘယ်သူတွေကိုယ်စားတကယ်ပြုပါလိမ့်????? ဒီစာရေးပြီးတာနဲ့ ကိုယ့် Account ထဲက မိန်းမချောလေးတွေ ၉၉% လောက်က ကိုယ့်ကို Block ကြမယ် Unfriend လုပ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အဲဒီလို မလုပ်တဲ့သူတွေကလည်း ဒီစာကို မဖတ်မိကြလို့ပဲ ဖြစ်မှာသေချာတယ်။ Rio အိုလံပစ် ဖွင့်ပွဲနေ့မှာ မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ အင်မတန် သိမ်ငယ်စွာနဲ့ တက်ရောက်တာကို မြင်မိတော့ ရင်ထဲမှာ လုံးဝကို မချိဘူး။ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အားကစားသမားတွေ ရဲ့မျက်နှာဟာ ညှိုးငယ်လွန်းနေတယ် ဆိုတာအထင်အရှား။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဝေဖြိုး Wai Phyo ရေးတဲ့ စတေးတပ်စ် ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်တွေပဲ အတွေးအခေါ် ခေတ်နောက်ကျ နေပြီလား တွေးမိတယ်။ ဝေဖြိုးဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် မှာ စတုတ္ထ နှစ်အထိ တူတူတက်ပြီး […]
ကျနော့်ကို သတိရရင် by Phoe San Chaung
ကျနော့်ကို သတိရရင် ဧရာထွန်းကအဒေါ်က အိမ်တံခါးပိတ်ရင်းနောက်ပြန်လဲကျတော့ လက်မောင်းက ကျိုးပါလေရော၊ဆေးရုံကြီးပို့၊ကျောက်ပတ်တီးစည်း၊အခြေအနေကောင်းရင် ပြန်ဆက်မယ်ပေါ့.အိမ်ပြန်ခေါ်လာ၊နောက်ကျ ဟော.မဖြစ်မနေခွဲရမယ်ဆိုတော့ ကုတင်သုံးရာကိုတင်လိုက်ရပါလေရော၊ဒါနဲ့ မနေ့ညက(အဲဒီနေ့ညမှာပဲ မန်းလေးမှာ စံချိန်တင် ၆.၈လက်မရှိအောင် ရွာတော့တာပါပဲ) သွားမယ်ဆိုပြီး ထွက်လာ..အမျိုးသမီးဆောင်ဆိုတော့ ယောကျာ်းလေးက ဝင်မရ၊ဝင်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ ဆယ့်တစ်ခွဲလောက်ထိထိုင်စောင့်၊အဆင်ကမပြေ၊ဒါနဲ့ ဘီယာဝင်သောက်၊ပြန်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တော့ မိုးကရွာ၊သည်းကြီးမည်းကြီးကိုရွာပါလေရော.. ဒါနဲ့ ၃၅လမ်း ဘီယာဆိုင်မှာ ခဏဝင်နား၊မိုးက တော်တော်နဲ့မတိတ်၊ဆိုင်ကလည်း ပိတ်ချင်နေပြီဆိုတော့ ကိုယ်တွေလည်း အားနာလာတာနဲ့မိုးရွာထဲ ထပြန်၊ တော်တော်ကိုမှားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးပဲ..မိုးရွာတာက မြင်မကောင်းဘူး။မဲ.သဲနေတာပဲ. ၃၅ ၇၃ မီးပွိုင့်.ရေက ခြေသလုံးလောက်ရှိတယ်.ရေစီးကလည်း သန်ပါ့..မရမကဆက်မောင်း၊ ကုန်းကျော်အောက် ခဏဝင်ခို၊အချိန်ကြည့်လိုက်တော့ နှစ်နာရီကျော်ပြီ..ကဲ.ပြန်မှပါလေဆိုပြီး ဆိုင်ကယ်လေးပြန်မောင်း၊ခင်စောမူကွေ့နား.သစ်ပင်တွေပြိုလဲ.ရေမြောင်းကာ တံတားကြီးပြိုကျနေတာမြင်လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ပျော်သွားတယ်.နက်ဖြန်မနက် ဓာတ်ပုံလာရိုက်ရင် သတင်းတပုဒ်ရပြီလေ 😛 ၄၁ကုန်းကျော်ကနေ တက်.အနောက်တည့်တည့်ဆင်းပြီး ၈၄အတိုင်းမောင်းလာတာ အေးဆေးပဲ..ဘုရားကြီးနောက်မုခ်ရောက်မှ ဘဝပျက်တာပဲ..ရေက ပေါင်လောက်ထိရောက်ပြီး ရေစီးက အရမ်းသန်တာဆိုတော့ ဆိုင်ကယ်က […]
Words from Mayor of Yangon
ယနေ့အကြိုက်ဆုံးပိုစ့် ================== လူမှုကွန်ယက် FBပေါ်မှာရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ရေးလိုက်တဲ့ပို့စ်ပါ ======================================= ဒီနေ့အချိန်လေးရတုန်း မြို့ထဲလမ်းလျှောက်ရင်း အရင်ကလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေး။ ရှပ်အင်္ကျီလက်တိုနဲ့ လျှောက်သွား၊ လျှောက်စားပေါ့။ PSO ကတော့ မနီးမနားကတော့ လိုက်လာပါတယ်။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ကြိုက်တာလည်းဝယ်။ ချက်ခြင်းလည်းမရနိုင်တဲ့ အမဲအူသုပ်တို့၊ ဘာတို့ဝယ်ရင်း၊ ဆိုင်ရှင်နဲ့စကား စမြီပြောတယ်။ လိုချင်တဲ့ အင်ဖေါ်မေးရှင်းလေးတွေပေါ့။ ဒီလမ်းဘေးဆိုင်ထွက်တာ ပိုက်ဆံမပေးရဘူးလားဆိုတော့ ဘာမှမပေးရဘူးတဲ့၊ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်ရှင်ကိုတော့ တစ်လတစ်ခါ တစ်သိန်းပေးရတယ်တဲ့ ဆိုင်ရှင်ဆိုတာ ဘယ်သူလည်းဆိုတော့ သူတို့လည်းမသိဘူးတဲ့ လူတစ်ယောက်တဲ့ သူ့ဆီက ဆိုင်ခမ်းငှါးဖွင့်တာတဲ့ နှစ်ဆိုင်၊ သုံးဆိုင်လောက်မေးတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ၊ ဒီလို လမ်းဘေးမှ နေရာအရင်ဦးပြီး လမ်းဘေးမြေနေရာကို လက်ညိုးထိုးရောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖူးချင် စမ်းပါဘိ၊ ဒူးရင်းသီးဆိုင်ဆိုရင် ပိုဆိုးသေး၊ လမ်းဆုံမှာ ဟိုဘက်ရော၊ […]
To..Min Lu..DaywoTar City
နောက်ကျောမှီမြင့်မြင့်နှင့် ကုလားထိုင်တွေကို ထိုင်မိလျှင် အထူးသဖြင့် ဧည့်ခံပွဲတွေမှာပေါ့၊ ကိုမင်းလူကို သတိရတတ်သည်။ ဒင်းသာ ငါ့အနားမှာရှိရင် စလို့နောက်လို့ ကောင်းလိုက်ဦးမယ့်ဖြစ်ခြင်းဆိုပြီးတော့လေ။ အလွန်တရာ ပုလှသော ကျွန်မ၏အရပ်က သူ့အတွက် ဟာသလုပ်လို့ ကောင်းနေတာကိုး။ ညစာစားပွဲတစ်ခုတွင် ကျွန်မကုလားထိုင်နောက်သို့ ကိုမင်းလူ ရောက်လာခဲ့ပြီး ထိုင်ခုံနောက်မှီကို အသာလှုပ်သည်။ ပြီးတော့ ပြောသည်။ ထိုင်ခုံအလွတ်မှတ်လို့ပါဗျာ။ အခုမှ မဂျူးထိုင်နေတာမှန်း သိတော့တယ်တဲ့။ ကဲ ကြည့်၊ ဘယ်လောက်တောင် ပြောင်မြောက်လိုက်တဲ့ဟာသလဲ။ — ‘ ကိုမင်းလူ သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေသတည်း ‘ (ဂျူး) ___________________________________________________ နောက် မင်းလူ အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ ဝိတိုရိယဆေးရုံတင်ရတယ် ပြောပါတယ်။ မင်းလူ ဆေးရုံတက်ချိန်မှာ မောင်ဝံသလည်း အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ပဲ ဆေးရုံတက်နေရတာ။ ဒါကို မင်းလူက အဆုတ်ကင်ဆာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့မယ်။ […]
ပန်ဒိုရာငရဲခန်းကယ်တင်ရှင် မအမာနီကို ကားတိုက်အပြတ် ရှင်းရန်ကြိုးစားမှုကဲ့သို့ထူးခြားသည့်ကားတိုက်မှု ” ဒေါ်အမာနီတစ်ဦးထဲ၏ အရေးအရာမဟုတ်တော့ပါ။ ” ****************☆☆☆☆☆************** မန္တလေးက ပန်ဒိုရာအဆီချလုပ်ငန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မိန်းလေးများကို ပိုင်ရှင်ကလူသားမဆန်စွာညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၎င်း ကိစ္စကို မန္တလေးနိုင်ငံရေး အင်အားစုမှ မအမာနီတို့ဇနီးမောင်နှံကခဲရာခဲစစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ရပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံမိန်းခလေးများမှပိုင်ရှင် စောလှဌေးကိုအမှု့ဖွင့်တိုင်ကြားထားပါသည်။ ယခုအခါ၎င်းအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုမှအထူးစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိပြီးလက်ရှိအစိုးရအနေုဖြင့်ကျူးလွန်သူများကိုတရားဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူရန်လိုလားလျှက်ရှိပါသည်။ ပန်ဒိုရာဘက်မှ မအမာနီကိုလဲအာမခံမရသော(66)/ဃ ဖြင့်အပြန်အလှန်တရားစွဲရန်ကြိုးစားခြင်း ရုံးချိန်းမတက်ခြင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ကမအမာနီကို ဖမ်ဝရမ်းမပါဘဲ လမ်းမတွင်ပိတ်ဖမ်းစေခြင်း။ နောက်ယောင်ခံလိုက်ခြင်များလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ (6.8.16)ရက်ည(10)နာရီဝန်းကျင်တွင် ပန်ဒိုရာ ငရဲခန်းသတင်းရေးသူ သတင်းထောက်မြူးငှက် စီးလာသောဆိုင်ကယ်ကို ကားတစ်စီးမှပြင်းထန်စွာတိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားပါသည်။သတင်ထောက်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိကာဆေးရုံတွင်အတွင်းလူနာအဖြစ်ကုသနေရပါသည်။ ည(11)နာရီတွင်(66)လမ်း(19)လမ်းနှင့်(18)လမ်းကြားမှာ ကားတစ်စီးက မအမာနီ ကားကို ပြင်းထန်စွာ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါသည်။ကံကောင်းစွာအသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်းအနည်းငယ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။နောက်ခန်းမှကလေး သတိလစ်သွားပါသည်။မအမာနီလဲဆေးရုံတင်ထားရပါသည်။၎င်းကားယဉ်မောင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းမိထားပြီးမည်သို့စစ်ဆေးသည်မသိရသေးပါ။၎င်းကားတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၏ကားအတွင်းမှ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကဒ်တစ်ခုရထားပါသည်။ မအမာနီရဲပြောပြချက်အရ ပန်ဒိုရာ ကိစ္စ စလုပ်ကထည်းက သူငယ်ချင်းများက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လိမ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါကြောင်း သူ့အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် […]
Proud Generations of Whole burma first
မျိုးဆက်လေးဆက် တိုင်တိုင် ဆယ်တန်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးပထမနေရာကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသူများ ဆယ်တန်း စာမေးပွဲသည် သိပ်မခက်လှသော စာမေးပွဲဖြစ်သော်လည်း ဂုဏ်ထူးများပါဖို့ တော့ခက်ခဲလှသည်။ ထိုထက်ပို၍ တစ်နိုင်ငံလုံး အဆင့် ၁ မှ ၁၀ အထိ ၀င်ရန်မှာ အလွန်ပင်ခက်ခဲလှပြီး အဆင့် ၁ နေရာကိုရရန်အတွက်မှု မည်မျှခက်ခဲကြောင်း ပြော၍ မလိုတော့ပါ။ သို့သော် ထို နိုင်ငံလုံး အဆင့် ၁ နေရာကို မျိုးဆက်လေးဆက်တိုင်တိုင် (၅) ကြိမ် ဆက် ရရှိခဲ့သူများ ရှိခဲ့ဖူးသည်ဟု ဆိုလျှင် အ လွန်အမင်းအံသြသွားနိုင်ပါသည်။ မသိသေးသူများအတွက် ထိုမိသားစု အကြောင်းကို ဗဟုသုတ အဖြစ်ဖော်ပြလိုပါသည်။ ဦးဟုတ်စိန် ယခင်က ဘင်္ဂလားစာမေးပွဲ (ခေါ်) ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို ၁၉၀၉ ခုနှစ်၌ စိန်ပေါလ်ကျောင်းမှ မောင်ဟုတ်စိန်က […]
မန္တလေး တောင်သမန်အင်း ရွှေနံ့သာရွာ ရေဝင်နေသည့် မြင်ကွင်းများ Photo- Than Htay
ပါမောက္ခချုပ်… စစ်ဆေးရေးခရီး ရတနာပုံ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ် တောင်သမန်အင်း Photo Credit Mm.
မြန်မာနိုင်ငံက ရှေးဟောင်းသုတေသန ဌာနဆိုတာက စီ အို ဘလက်ဒန် နှင့် တော်စိန်ခိုတို့ မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း အသက်မဲ့သွားတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။ လွတ်လပ်ရေးရပီးနောက်ပေါ့။ ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရတွေဟာ ရှေးဟောင်းသုတေသန အပါဝင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေအပေါ် လေးစားတန်ဖိုးထားခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ ဦးအောင်ဇေယျ လက်သုံးတော်ဓါး၊ နာမည်ကျော် ယိမ်းနွဲ့ပါဓါး စတဲ့ ရှေးဘုရင် အသုံးဆောင်တော်တော်များများ လက်သည်မပေါ်ပါဘဲ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာ ဦးနေဝင်းခေတ်။ ပုဂံဘုရားရုပ်ပွားဆင်းတုတွေ အပျောက်အများဆုံးက စစ်အစိုးရခေတ်။ ခုတော့ NLD အစိုးရ ခေတ်။ ပုဂံဒေသ ယူနစ်စကို စာရင်းဝင်ဖြစ်ဖို့ ယူနစ်စကိုက ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်က ဦးဆောင်ပြီး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ။ ပညာပေးအစီစဉ်တွေ ။ ရေတို ရေရှည် စီမံကိန်းတွေ စသဖြင့် ကူညီပန့်ပိုးပေးခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ဝန်းကျင်ကတည်းက။ တဖြေးဖြေး အရှိန်ရလာပြီးတဲ့နောက် […]
Miss Universe Monywa 2016 official swimsuit photos Part 2
photo credit to MK
Amay Suu & Julie Bishop MP
Credit to Australian Embassy in Myanmar
Ilagel teak/timber still exporting from Myanmar/Burma. What’s government doing?
မရိုးသေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတပုဒ် ++++++++++++++++++++ ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဧရာဝတီမြစ်၏ပထမမြစ်ကျဉ်းမရောက်မီတွင် ဆင်ဘိုအမည်ရသော မြိူ့ငယ်လေးတမြို့ရှိလေသည်..ထိုမြို့ငယ်လေး၏အထက် မြစ်ရိုးအတိုင်းဆန်တက်လာသောအခါ နောင်ပွဲ မံဖွား နယ်ခြား ဆွန်ဒူ ညောင်ပင်သာ တာဟိုးနား ငှက်ပျောတော စသည့် ရှမ်းနီနှင့်ကချင်လူမျိုးများ ရောနှောနေထိုင်သောရွာကလေးများရှိပါသည်…အချိန်ကာလအားဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၏ ဖေဖော်ဝါရီ လလယ်ခန့်နေ့တနေ့၏ ညနေခင်းတခုတွင် ဆွန်ဒူအမည်ရသောရွာကလေးပေါ်မှကြည့်လိုက်လျင် ဆွန်ဒူ ၏တဖက်ကမ်း မံဖွား ဆင်ဘိုဖက်အခြမ်းမှ ပုရွက်ဆိတ် ကလေးများပမာ စီတန်း၍လာနေသောအရာတစ်ခုခုကိုမြင်နေရသည်။ အချိန်က ညနေ မွန်းလွဲ ၅ နာရီခန့်။ သို့ပေမယ့် ထိုအရာသည်ပုရွက်ဆိတ်ကလေးများမဟုတ်ပါ..တရုတ်လူမျိုးနှင့် နအဖ စစ်တပ်မှ အကူအညီဖြင့်မှောင်ခိုထုတ်နေသော ရတနာတန်းဝင် သံမလန်း နှင့် ကျွန်းသစ်များတင်ထားသော ၃ ကရောင်း ကားကြီးများဖြစ်ပါသည်။ ကားတစီးတွင်အနည်းဆုံး ၁၅ တန်ခန့်ရှိလေသည် ယခုမျက်စိတဆုံးတွင် ကားစီးရေပေါင်းနှစ်ရာကျော်ခန့်ရှိလေသည်။ ထိုကားများသည် ဘာအတွက် […]
Myanmar domestic helpers & Myanmar landlords’ stories
စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာအိမ်အကူလေးများအရေးကို ကူညီပေးနေသော ဒေါ်ခင်လေးထံမှ “မရေးချင်ဘဲ ရေးရဦးမည် (၄)” အိတ်ဖွင့်ပေးစာ…. 20.7.2016 မနက်ပိုင်းမှာ ညီမငယ်တစ်ယောက်မှ ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ သူမ၏ အိမ်ရှင်မှ လစာမပေးတာ သုံးလရှိဖြစ်ကြောင်း အဆင်မပြေသေး၍ မပေးနိုင်သးလျှင်လည်း အဆင်ပြေမှပေးပါ ။ ကျွန်မကို အိမ်ရှင်အသစ်ပြောင်းနိုင်ရန် အပြောင်းအရွှေ့စာရွက်မှာ လက်မှတ်ထိုးပါရန်ပြောသောအခါ ထိုးမပေးနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်ဟု ပြောဆိုလာပါသည်။ ခင်လေးက ဘာကြောင့်လစာကို နောက်မှပေးပါလို့ ပြောရတာလည်း မြန်မာအိမ်ရှင်ဖြစ်နေလို့လားလို့ မေးတော့ ဟုတ်ပါတယ် အိမ်ရှင်နံမည်က ဒေါ်—– ပါဟုပြောပါတယ်။ အိမ်ရှင်နံမည်ကြားတာနှင့် လွန်ခဲ့သော ဇန်န၀ါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလက အဖြစ်များကို ပြန်ပြောင်းသတိရမိပါသည်။ ထိုစဉ်က ထိုအိမ်ရှင်မှ အိမ်အကူအနေဖြင့် လျှောက်ပေးမည် မည်၍မည်မျှပေးရမည်ဟုဆိုကာ တဆင့်ခံစလုံးရောက် အလုပ်လုပ်သူများ၏ အဆက်အသွယ်ဖြင့် အိမ်အကူပါမစ်ကို ရောင်းစားခြင်းပါ။ (စင်္ကာပူရဲ့ စနစ်အရ အိမ်အကူအဖြစ် […]
69th Anniversary of Martyrs’ Day
Photo credit to AFP / Ye Aung Thu
Ilegal expansion of Greatwall hotel from Mandalay
မန်းစည်ပင်တောင်မနိုင်တဲ့ ဂရိတ်ဝေါဟိုတယ်ကျုးကျော်မှု ဂရိတ်ဝေါဦးတင်မောင်(ခ) လီစန်ရှင်း ပိုင် ဂရိတ်ဝေါဟိုတယ်ဟာ ဟိုတယ်နောက်ကျောက ငွေတစ်ချောင်းမြောင်း (ဂရိတ်ဝေါမြောင်းလို့ နာမည်ပြောင်ခေါ်) ကို ကွန်ကရစ်နဲ့ အသေလောင်းမြောင်းဖုံးလုပ်ပြီး ကားပါကင်လုပ် ကျုးကျော်ထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို တစ်မြို့လုံးသိပါတယ်။ အရင်အစိုးရလက်ထက်ကတော့ ဘယ်သူမှ မထိရဲပါဘူး။ မန်းစည်ပင်မှ သန့်ရှင်းရေးဌာနမှူးကြီးကတောင် အောက်ပါအတိုင်းငြီးယူရပါတယ်။ ငွေတစ်ချောင်းမြောင်းဆယ်တိုင်း အခက်အခဲဖြစ်နေရပါတယ်။ ယခုဒီမိုကရေစီ အစိုးရသစ်လက်ထက် မြို့တော်ဝန်သစ်ကြီးလက်ထက်မှာရော ယခုကျုးကျော်မှုကို အရေးယူလို့မရဘူးလား။ ကျုးကျော်ဆိုတာ ဘယ်အစိုးရလက်ထက်ရောက်ရောက် တရားမ၀င်ပါဘူး။ ယခုမန်းမြို့မှာ ၁၆.၇.၁၆ ရက်နေ့ကစပြီး ကျုးကျော်တွေကို ဒဏ်ငွေတင်မက တရားစွဲဆိုထောင်ချတဲ့အထိ လုပ်ပါတော့မယ်လို့ တရားဝင်အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ယခုလို ခရိုနီသူဌေးကြီးတွေရဲ့ ကျုးကျော်မှုတွေကိုလည်း ဆင်းရဲသား လမ်းဘေးဈေးသည်များနဲ့တန်းတူ တရားမျှတစွာအရေးယူပေးဖို့ မြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာဦးရဲလွင်အား တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်။ သို့မှသာ တရားမျှတမှုရှိပါလိမ့်မယ်။ လေးစားစွာဖြင့် . […]
“အသစ်ရှာချစ်ပြီး ပျော်ပါတော့နော်” by Saya Soe Min
“အသစ်ရှာချစ်ပြီး ပျော်ပါတော့နော်” အာရုံတွေ နောက်လိုက်တာ။ မြန်မာတွေဟာ အားအားရှိ ကွဲပဲကွဲနိုင်လွန်းတယ်။ သူများနဲ့ ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်ရတယ်လို့ မရှိဘူး။ အလကားနေ သူတို့ချင်း ထသတ်နေကြတာနဲ့ ဟိုက ယာလည်းညက် ကြက်လည်းပန်း အသာလေးကောက်စားရုံပဲ။ သည်ပုံသည်မျိုး သည်အချိုးနဲ့ဆိုရင် ခက်ရချေသေးရဲ့ လို့ စိတ်ပူနေတဲ့သူတွေလည်း ပူနေကြမှာပဲ။ ကိုယ်ကတော့ မပူပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲနီးတုန်းကလည်း အခုလိုပဲ ပါတီတွေ ရာချီပြီးကွဲခဲ့သေးတာပဲ။ အပြီးသတ်တော့ အုပ်စုနှစ်စုပဲ ကျန်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေတောင်မှ အနိုင်နိုင်နေရာယူရတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ပိုလို့တောင် သိသာလာတယ်။ အနီပါတီ အစိမ်းပါတီ ပါတီစွဲ ဝါဒစွဲလေးတွေတောင် မရှိတော့ဘူး။ တကယ်တမ်း ထိပ်တိုက်တွေ့လာတာ အုပ်စုနှစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ အရင်လူ နဲ့ နောက်လူ။ အဲ့လိုပြောတာပဲ ကောင်းပါတယ်လေ။ တပ်ဘက် အရပ်ဘက် […]
Posted in Articles, Asia Entertainment, Blogroll, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, Notes | No Comments »